2019 အမြင့်မြန်နှုန်း stack တံခါး China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း stack တံခါး,Rapid stack တံခါး,အစာရှောင်ခြင်း PVC stack တံခါး
Home > ထုတ်ကုန်များ > မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး > မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း stack တံခါး > 2019 အမြင့်မြန်နှုန်း stack တံခါး
2019 အမြင့်မြန်နှုန်း stack တံခါး
ထွက်နိုင်ရေး: 100 sets/Month
သင့်ရဲ့တံခါးကိုအရွယ်အစား6*6မီတာထက်မကျော်လွန်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့သင်မြန်နှုန်းမြင့်တံခါးကိုချင်ပါတယ်။ အကယ်. ကျိကျိတက်မြန်နှုန်းမြင့်တံခါးကိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူ ကျေးဇူးပြု.
တံခါးကို stacking မြန်နှုန်းမြင့်:
အထူးမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းကိုလှိမ့တံခါးများအတွက်အသုံးပြုမော်တော်: သုံးအဆင့် 380V; နှင့်တစ်ခုတည်းအဆင့် 220 V ကိုပါဝါ: 0.55-1.5KW, IP55 50 Hz ။
တံခါးကိုအရွက် 1.0 မီလီမီတာမြင့်မားတဲ့သိပ်သည်းဆ polyester ဖိုင်ဘာသို့မဟုတ်ပြင်သစ်နိုင်ငံလုပ် 1.5 မီလီမီတာပွင့်လင်း PVC ပျော့စာရွက်။ တံခါးကို stacking အဆိုပါမြန်နှုန်းမြင့်ကိုလှိမ့မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးလိုအပ်, အထူးကြပ်မတ်ပစ္စည်းစီးဆင်းမှုနှင့်အတူဖြစ်သောစက်မှုပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
Doorframe နှင့်ကြိတ်စက်လျှပ်စစ်အမှုန့်အပေါ်ယံပိုင်းချမှတ်ထူအရည်အသွေးမြင့်အအေးရှင်းပြီသံမဏိနဲ့4မီလီမီတာအထူမော်တာကက်ဘိနက် 2.2 မီလီမီတာအဖုံးဖုံး, စံအရောင် (အနည်းငယ် milky အဝါရောင်) အဖြူဆင်စွယ်ဖြစ်ပါသည်
မြန်နှုန်းမြင့်အဖွင့်-ပိတ်အင်္ဂါရပ်အားလုံးမြန်နှုန်းမြင့်ကိုလှိမ့တံခါးများကြောင့်လည်းဆွေမျိုးတံဆိပ်ခတ်ရည်မှတ်လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီနေစဉ်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းမကြာခဏအသုံးပြုသည်ရှိရာလျှောက်လွှာများအတွက်သင့်လျော်သောအရာ, 1.2 / sec 0.7 ၏အဖွင့်-ပိတ်ပွဲမြန်နှုန်းနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။
Photocell အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး (စံ) က photocell ဘေးကင်းလုံခြုံမှု switch သည်တံခါးကိုလမ်းကြောင်းအောက်မှာ installed ဆက်စပ်မှုအနီအောက်ရောင်ခြည်စက်ကိုအစုတခုဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းကိုလှိမ့တံခါးကိုပိတ်ပြီးသောအခါ, ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသို့မဟုတ်တစ်ဦးအရာဝတ္ထုလုပ်ကွက်ဟာဆက်စပ်မှုနီအောက်ရောင်ခြည်သုံးလျှင်, တံခါးကိုပြောင်းပြန်ဦးတည်ချက်မှထမြောက်ကြလိမ့်မည်။
specification အဆိုပါ Maxmum opining: W20000mm H20000mm x ။
နောက်ထပ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုသည်အောက်ခြေ Edge အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး (Standard) အောက်ဆုံးအစွန်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုတစ်ခု optional ကိုဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိရိယာဖြစ်သည်။ တံခါးကိုပိတ်လျှင်, အောက်ခြေအစွန်းနှင့်မည်သည့်အရာဝတ္ထုအကြားအနည်းငယ်တိုက်မှုဆန့်ကျင်ဘက်ဦးတည်ချက်ကဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။
အရောင်များအဆိုပါဖောက်သည်ထိုကဲ့သို့သောအဝါရောင်, လိမ္မော်ရောင်, အပြာ, အဖြူ, ပွင့်လင်းခြင်းသို့မဟုတ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုက်ညီတစ်ဝက်ပွင့်လင်းအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များအတွက်ကိုလှိမ့တံခါးကိုရှေးခယျြနိုငျသညျ။
ကြိုးအမျိုးအစား 3. အဝေးမှထိန်းချုပ်အမျိုးအစား 4. Geomagnetic ကွင်းဆက်အမျိုးအစား 5. Radar သော induction ခွေးအထိန်းချုပ်မှု 1. Push ကိုခလုတ်အမျိုးအစား 2. ၏ Mode ကို။
မြန်နှုန်းမြင့်တံခါးကိုတပ်ဆင်ထားသောလာမည့် PVC ထည် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
PVC ကုလားကာအလိုအလျောက် stacking မြန်နှုန်းမြင့်တံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြန်နှုန်းမြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းတံခါးကို stacking မြင့်မားသောအရည်အသွေး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
CE LVD မြန်နှုန်းမြင့် PVC stacking roller shutter အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Dock ဖြေရှင်းချက်အတွက်လျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သော PVC stacking door အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တံခါးဖွင့်ခေါက် PVC မြန်နှုန်းမြင့်မြန်ဆန်သောလုပ်ဆောင်ချက် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တံခါးဖွင့်ခေါက်မြင့်မားသော preformance အစာရှောင်ခြင်းအရေးယူ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း stack တံခါး Rapid stack တံခါး အစာရှောင်ခြင်း PVC stack တံခါး မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း PVC stack တံခါး မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း Rapid stack တံခါး မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း stack Rolling တံခါး မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း Hot-Sale တံခါး မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး PVC